Danjiraha Britain u jooga Soomaliya oo la kulmay RW Cumar – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Danjiraha Britain u jooga Soomaliya oo la kulmay RW Cumar
A warsame 11 January 2015 11 January 2015
Mareeg.com: R/wasaaraha Soomaaliya, Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay danjiraha Britian u qaabilsan Soomaaliya, Neil Wigan.
Labada mas’uul ayaa ka wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin xoojinta xiriirka u dhaxeeya xafiiska raysul wasaaraha cusub iyo safaaradda Britian ee Soomaaliya, dardar-gelinta howlaha muhiimka ah ee hor yaalla xukuumadda cusub sida dhismaha guddiga doorashooyinka iyo dhammeystirka nidaamka federaalka.
RW Cumar ayaa sheegay inuu sii wadi doono wada-shaqeynta u dhaxeysa labada dowladood ee Soomaaliya iyo Britain.
Danjiraha Britain ayaa ka dalbaday raysul wasaaraha Soomaaliya inuu si dhaqso ah u soo dhiso xukuumad tayo leh oo ka miro-dhalin karta hiigsiga 2016.
Nil Wigan ayaa intaas ku daray in dowladdiisa ay taageero la garab taagan tahay dowladda federaalka iyo shacabka Soomaalida.
Suldaan ku kacay Somaliland oo la sheegay in Itoobiya xirtay
Danjire Afey oo amaanay qaabka dowladda Soomaaliya u martigelisay shirkii IGAD